गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न स्वच्छता समितिको आग्रह | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न स्वच्छता समितिको आग्रह
गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न स्वच्छता समितिको आग्रह
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार 27 days ago	0 25 Views
घोराही। वडास्तरीय खाद्य स्वच्छता समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम घोराहीमा सम्पन्न भएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दाङले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। त्यस अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डागीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वडास्तरीय खाद्य स्वच्छता समिति गठन गरिएको छ। जसका सदस्यहरुमा दाङ उद्योग वाणिज्य संघ, वास फोरम, होटल व्यवसायी समिति, वडा प्रहरी, उपभोक्ता हित संरक्षण समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
समितिको सदस्य सचिवमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दाङका प्रतिनिधि विवेक बन्जारा रहने बताइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय प्रमुख बञ्जाराले दैनिक उपभोग्य वस्तुको लेवलमा खाद्य पदार्थको नाम, समिश्रण, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, व्याच नं. तौल र उद्योगको पूरा नाम ठेगाना अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। बञ्जाराले खाद्य पदार्थ उत्पादन गरिने क्षेत्र, उत्पादन गर्ने उद्योग, बिक्री वितरण गरिने क्षेत्र खाद्य पदार्थमा हुने मिसावटलगायका विषयमा उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस अवसरमा वडा अध्यक्ष शक्तिराम डागीले गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।मानव स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताउदै त्यसका लागि सबै सचेत हुनपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले दैनिक उपभोग्य वस्तु मिसावटरहित हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले प्रतिबन्ध गरेका खाद्य वस्तु व्यापारीले खुलेआम बिक्री वितरण गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विभिन्न पसलको अनुगमन
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मा गठित खाद्य स्वच्छता समिति दाङले विभिन्न पसलको अनुगमन गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित बालमन्दिरमा रहेका मनकामना होटल, कन्डरा होटल, इन्दिरा होटल, राप्ती फ्रेस हाउसलगायतका होटलको अनुमगन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा घोराहीस्थित होटल कन्दरामा अबैध मदिरा बिक्री वितरण हु“दै आएको पाइएको थियो।
Previous: एकल महिलालाई उन्नत जातका बाख्रा
Next: ऐरावतीमा दुई सय ८० जनालाई रोजगारी